ဝပေမယ့် လှအောင် ဓာတ်ပုံ ဘယ်လိုရိုက်မလဲ? - YOYARLAY Digital Media and News
ဝနေလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ပေမဲ့ မလှမှာစိုးလို့ မရိုက်ဖြစ်တာကြာနေပြီလား? ဝပေမယ့် လှနေတဲ့ မမဝဝလှလှတွေအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ကျစ်လျစ် သွယ်လျလှပပြီး ချစ်စရာပုံလေးတွေရအောင် ကိုယ်နေဟန်ထား ဘယ်လိုထားရမယ် ဘယ်အနေအထားနဲ့ ရိုက်ရမလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကင်မရာရှေ့မှာ တည့်တည့်ရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ သင့်ကို နဂိုထက် ပိုပြီးလူကောင်ကြီးစေပါတယ်။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းရှေ့ကိုထုတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ၄၅ ဒီဂရီလောက်လှည့်ပြီး ရိုက်ကူးခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကို သေးသွယ်စေမှာပါ။
လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကိုချထားခြင်း၊ လက်ပိုက်ထားခြင်း နဲ့ လက်နောက်ပစ်ထားခြင်းတို့က သင့်ကို ဝစေတယ်လို့ ထင်မှတ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခါးကို လက်တစ်ဖက်ထောက်ပြီး ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လက်မောင်းကြား အနည်းငယ်ကွာဟမှု ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ကို နဂိုထက် ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။
ကိုယ်နေဟန်ထားကောင်းကောင်းရရှိဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ ပခုံးတွေကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ ပခုံးတွေကို လိုသလို အနိမ့်အမြင့် ညှိပေးပြီးရိုက်ကူးခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ပိုပြီး စမတ်ကျလှပစေမှာပါ။
ဦးခေါင်းကို (အနည်းငယ်)မော့ထားပြီး ရိုက်ကူးခြင်းဟာ မေးရိုးနဲ့ လည်ပင်းကြားရှိ အဆီပိုများကြောင့် မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအပြုအမူဟာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ မေးစေ့နှစ်ထပ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုဖုံးကွယ်ရာမှာ တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်။အာခေါင်ကို လျှာ ထိထားခြင်းကြောင့် မေးစေ့မှာရှိတဲ့ အဆီပိုများ အောက်ကိုလျော့မကျစေတော့ဘဲ ခဏတာ အပေါ်ကို ပြန်တက်သွားတဲ့အတွက် မေးစေ့နှစ်ထပ် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ခုံတန်းတစ်ခုမှာ ထိုင်ပြီး ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြီးထွားကြောင်း ထင်ပေါ်စေမယ့် အလယ်မှာထိုင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ခုံတန်းရဲ့ တစ်ဖက်စွန်းမှာသာထိုင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခြေထောက်များကို ယှက်ပြီးထိုင်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုအရပ်ရှည်တယ်လို့ထင်မှတ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာကို အပေါ်စီးမှနေပြီး ရိုက်ကူးခြင်းဟာ သင်မူလခန္ဓာကိုယ်ကို ပုကွကွဖြစ်ပေါ်စေပြီး နဂိုထက် အရွယ်အစားပိုကြီးမားစေပါတယ်။ဒါကြောင့် မေးစေ့အောက်မှ တစ်တန်းတည်းထားပြီးရိုက်ကူးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပိန်သွယ်တယ်လို့မြင်စေမှာပါ။
အဝတ်အစား ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်တတ်ခြင်းဟာလည်း သင့်ကို ပိုပြီးကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။ အတွင်းခံအဝတ်အထည်များကိုလည်း သင်နဲ့အဆင်ပြေကိုက်ညီတဲ့ အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထက် ကြီးတဲ့အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ နဂိုထက်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုပြီးကြီးမားစေတဲ့အတွက် အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားများကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးသလို အရောင်ရွေးချယ်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို သတိပြုစေနိုင်မယ့် အရောင်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်သင့်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်ရောင်တည်းသာ ပါဝင်တဲ့ အဝတ်အစားများကိုသာ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို နဂိုထက် ပိုပြီး သွယ်လျစေတယ်လို့ လေ့လာချက်များအရ သိရှိရပါတယ်။
ကဲ …အခုလောက်ဆိုရင် ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေ ဝပေမယ့် လှအောင် ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီပေါ့နော်။
Previous Previous post: ကံတရား ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ ရတဲ့ အရာပါ
Next Next post: သမီးမိန်းကလေးမွေးလေလေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိလေလေဖြစ်စေမယ့် ရွာတစ်ရွာရဲ့ဓလေ့